एक छात्र नेताको दैनिकी
२०७७ जेठ १० शनिबार ०७:११:००
पछिल्लो रात ऊ धेरै अबेरसम्म गल्लीको मोडमा रहेको चिया पसलमा बसेर क्रान्ति गरिरहेको थियो । करिब दुई बजेसम्म उसले व्यवस्था परिवर्तन र नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्ने कुरा गरेको थियो । देशदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सारा समस्याहरूलाई हल गरेउप्रान्त जब ऊ आफ्नो कोठामा फर्कियो, त्यतिबेला ऊ एकदमै सन्तुष्ट थियो ।
तर यही समय, सन्तोष असन्तोषमा परिवर्तन भइसकेको थियो । अहिले नौ बजेको थियो र यस्तो खुसीको मौसममा, जब सुत्नुभन्दा गतिलो काम अरु केही हुँदैनथ्यो, उसले उठ्नु परेको थियो । त्यसबेला उसले आफ्नो नेतागिरिलाई गाली ग¥यो र फेरि सुत्ने प्रयत्न ग¥यो । जब उसलाई सम्झना भयो, विश्वविद्यालयको चुनाव नजिकै आएको छ, यतिबेला उसका लागि विश्वविद्यालय जानु अत्यन्त जरुरी छ ।
ऊ खाटमै बसेर चुरोट पिउन थाल्यो, किनभने उसले आफ्नो त्यस क्रिया– जुन क्रियालाई शास्त्रहरूमा नित्य क्रिया भन्ने गरिएको छ– लाई सम्पादित गर्नमा सुविधा होस् भन्ने चाहेको थियो । हुन त ऊ क्रान्तिकारी भएका कारण यस्ता कुनै पनि दैनिक क्रियामा विश्वास गर्दैनथ्यो । प्रायः यस्ता क्रिया उसले साप्ताहिक र मासिक किस्तामा गर्दथ्यो ! चुनावको मौसम भएका कारण पनि अचेल यसलाई नियमित गर्नुपरेको थियो ।
चुनावमा चुस्ती अत्यन्त सहायक तत्व हो र दुर्भाग्य, चुस्ती त्यसरी नै आउँछ । खुसीखुसी उसले सबै कार्य सम्पादित गर्यो । एक पटक फेरि उसलाई व्यवस्थाको यस भद्दापनमाथि रिस उठ्यो । ऊ जस्तो महत्वपूर्ण व्यक्ति– जसको आवाजमा हजारौं केटा एकसाथ विश्वविद्यालय छोडेर सडकमा ओर्लिन्छन्– ले चिया पिउनका लागि केही पर रहेको चिया पसलसम्म जानु पर्छ । हिजो राति उसको दलका जिल्ला शाखाका अध्यक्ष जतिखेर व्यवस्थाका विरुद्धमा आफ्नो आक्रोश पोखिरहेका थिए, त्यसबेला ती व्यक्ति उसलाई हास्यास्पद लागिरहेका थिए । तर अहिले उसलाई उनको आक्रोश सही लागिरहेको थियो । उनको गुनासो थियो, ‘यस व्यवस्थामा जब मानिसले सानो कारको लाइसेन्स सजिलै गरी पाउँछन् भने आखिर के कारण हो कि उनले चिनीको कोटा पनि पाइरहेका छैनन् ? अवश्य पनि यसमा व्यवस्थाको नै कुनै षड्यन्त्र छ ।’ उसलाई लाग्यो कि समयमा चियाको व्यवस्था पनि षड्यन्त्रका कारण हुन सकिरहेको छैन । उसले आफ्नो टाउको हल्लायो र स्वयम्लाई विश्वास दिलायो कि शीघ्र नै उसको पार्टीले देशमा समाजवादी व्यवस्था ल्याउनेवाला छ । समाजवाद आउनासाथ उसको पार्टीका जिल्ला अध्यक्षका लागि चिनीको कोटा र उसका लागि ओछ्यानमै चिया सजिलै उपलब्ध हुनेछ !
चिया पिएर ऊ बिस्तारैबिस्तारै विश्वविद्यालय क्याम्पसतिर लाग्यो । क्याम्पस नजिक पुग्दा नपुग्दै उसको सारा सुस्ती गायब भइसकेको थियो र ऊ यतिबेला पुरा फूर्तिलो र ताजा भइसकेको थियो । अगाडिबाटै केही भोटहरू आइरहेका थिए । उसले केही टुथपेस्टीय विज्ञापन शैलीमा आफ्नो बत्तिसी दाँत देखायो र हे...हे...गरेर हाँस्दै तिनको हालचाल सोध्न थाल्यो । त्यसपछि जसरी उसको दाँत देखाउने क्रम सुरु भयो, त्यो ऊ क्लास रुम पुग्दासम्म यथावत् रह्यो । बाटोभरि उसका चम्चाहरू उसको लगातार पान खाने बानीले मैलो र पहेँलो भएको दाँत देखेर आश्वस्त हुँदै थिए र उसका विरोधीहरूलाई तोडने विषयमा आफ्नो शुभराय व्यक्त गरिरहेका थिए ।
क्लास रुम र उसमा पुस्तौंको दुस्मनी थियो । तर चुनावका कारण यतिबेला क्लास रुमले उनलाई चुम्बकले जस्तै तान्दै लगेको थियो । त्यहाँ जाँदा उसलाई दुईवटा फाइदा थियो । एउटा, ऊ आफ्नो विरोधीहरूको प्रचार ‘उसको पढाइसँग कुनै विशेष नाता छैन’को खण्डन गर्न सक्दथ्यो भने अर्को, यसबाट केही जनसम्पर्क पनि वृद्धि हुन्थ्यो ।
कक्षा कोठामा अध्यापक महोदय अहिलेसम्म आएका थिएनन् । ऊ दाँत देखाउने आफ्नो पुरानै प्रक्रियामा फेरि जोडदाररुपमा जुटेको थियो । उनले सबैसँग खबरखाबर सोधेपछि अध्यापकको परिवारका महिलाहरूका विषयमा शिष्ट किसिमबाट केही विचार उपस्थित छात्रहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यो । र, फेरि दादा किसिमका एक छात्रसँग केही ‘अति गोप्य’ कुराकानी गर्न भनेर कोठाबाट निस्किएर बरण्डामा गयो । ती दुवै रहस्यमयी शब्दहरूका साथ साउती गरिरहेका थिए । त्यसैबेला अध्यापक छेउबाट हिँडे । उसले अध्यापकमाथि एउटा धार्मिक किसिमको ‘रिमार्क’ बोल्यो । अध्यापक आत्तिएर यताउता हेर्न थाले । र, फेरि केही नसुनेजस्तो गर्दै कक्षामा छिरे । अब ती दुवै ठूलोठूलो आवाजमा कुरा गरिरहेका थिए । अध्यापकले आफ्नो दुईदशक पुरानो नोट्स निकाले र आत्तिएको तर सुस्त आवाजमा तिनको आवाजसँग प्रतिष्पर्धा गर्न थाले ।
कक्षातिर उपेक्षापूर्ण नजर दिँदै ऊ दादा प्रवृत्तिको छात्रका साथ चौरमा पुग्योे । त्यहाँ उपस्थित कैयन् छात्रहरूले उसलाई घेरे । उनीहरू एकै स्वरमा उसको सामुन्ने आफ्ना पीडा रुँदै गाउन थाले ! उसले पनि धेरैलाई आश्वासनको रस सरोबरमा निथु्रक्क भिजाउने काम गर्यो । कतिलाई उसले आफ्नो घरमै बोलायो । अनि केही छात्रहरूलाई लिएर रजिस्ट्रारको अफिस तिर गयो । जब ऊ रजिस्ट्रारको अफिसतिर लाग्यो, उसका पछिपछि मानिसहरूको भीड बढ्दै गएको थियो । भीडमा रहेका सबै एक स्वरमा बोलिरहेका थिए । ऊ पनि निस्काम भावले मुस्कुराउँदै तिनका अनगिन्ती प्रश्नहरूको उत्तरमा एकाध सूक्तिवाक्य बोल्दै गइरहेको थियो । रजिस्ट्रारको अफिसमा छिरेर उसले क्लर्कहरूतिर आफ्नो आग्नेय दृष्टि फ्याँक्यो । र, दुःख व्यक्त गर्यो कि उसको त्यो दृष्टिबाट कोही भष्म भएनन् !
उप्रान्त क्लर्कहरूसँग उसले घरेलु सम्बन्ध स्थापित गर्यो । तिनलाई आफ्ना चम्चाहरूको काम गरिदिने विषयमा केही निर्देशन दियो । त्यो निर्देशनपछिको भाग अझै धेरै महत्वपूर्ण थियो जसमा उसले काम नभएको खण्डमा केही विशेष परिणामहरूका बारेमा क्लर्कहरूलाई आश्वस्त गराएको थियो । क्लर्कहरूले पनि यही भाग पूरा मनले सुने र काममा लागे ।
रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट निस्किएपछि ऊ अश्वमेधी घोडाजस्तै दिग्विजयका लागि पूरा विश्वविद्यालय क्याम्पसभरि घुमिरह्यो । बाटोभरि ऊसँग तीन किसिमका मानिस भेटिए । तिनलाई बेग्लाबेग्लै रुपबाट उसले सम्बोधन ग¥यो । पहिलो किसिमका व्यक्तिहरू उसका चम्चाहरू थिए, जसलाई उसले आफ्नो चुनावको जुलुसमा आउन निर्देशन दियो । त्यसको बदलामा तिनको क्याम्पस भर्ना, छात्रवृत्ति र कक्षा उपस्थितिमा हुने कमीका विषयमा निश्चिन्त रहन सल्लाह दियो ।
दोस्रो प्रकारमा अध्ययनशील छात्रहरू थिए जो वर्षमा कम्तीमा पनि दुई महिनाको हडताल चाहन्थे । जसकारण तिनले आफ्नो कोर्स पुरा गर्न सकून् । किनभने तिनलाई थाहा थियो, क्लासमा कोर्स पूरा गरेर अध्यापक महोदयहरूले विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा खतरामा पार्ने काम गर्न सक्दैनथे । उसले ती छात्रहरूलाई पनि आश्वासन दियो कि जितेपछि दुई महिना मात्रै किन पूरा वर्षैभरि विश्वविद्यालय बन्द रहन सक्छ ? यो कुरामा धेरैजसो अध्ययनशील छात्रहरूको अनुहारमा प्रशन्नताका रेखा देखा परे । कतिपय भने गम्भीर चिन्तामा डुबे । गम्भीर चिन्ता गर्ने छात्रहरूका अगाडि उसले आफ्नो मैलो दाँत फेरि देखायो । छात्रहरूलाई लाग्यो, ऊ मजाक गरिरहेको छ । त्यसैले तिनीहरूलाई विश्वास भयो, उसमा ‘सेन्स अफ ह्युमर’ नामक पदार्थ अधिक मात्रामा रहेको छ ।
तेस्रो दर्जामा केही विकट किसिमका मानिस पर्थे । तिनीहरू उसका विरोधी थिए । ती उसको दाँत भाँच्नेदेखि अङ्गभङ्ग गर्नेसम्मका काममा गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्दथे । तिनले ठाउँठाउँमा हुटिङको प्रयास पनि गरेका थिए । तर उसले गीताका केही श्लोक कोर्समा भएका कारण पढेको थियो । त्यसैले निस्काम भावका साथ तिनको व्यङ्ग्य बाण झेल्दै आफ्नो काममा ऊ लाग्योे ।
विश्वविद्यालय क्याम्पसमा दिग्विजय गरेपछि ऊ अध्यापक कोलोनीतिर लागि निस्कियो । दुई तीन अध्यापकहरूले गएको वर्ष ऊबाट पम्पलेट निकाल्न लगाएका थिए । त्यसैले चुनावमा मद्दत गर्नलाई उसले भनेको थियो । ऊ कतिपय घरमा खाली खल्ती छिरेको थियो र निस्किँदा खल्ती भरिभराउ भएको थियो ।
त्यसपछि ऊ डिनको घरतिर लाग्यो, जो आफ्ना मित्रहरूमाझ उसलाई आफ्नो खास मानिस भन्थे । डिन महोदय विश्वविद्यालय जाने तरखरमा थिए । उसलाई देखेर रोकिए । डिनले सल्लाह दिए– ‘भगवान्ले यस्ता शुभकार्यका लागि रातको सिर्जना गरेका छन् । त्यसैले हामीले त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ ।’
डिनको आस्तिक सल्लाह उसले उपेक्षाका साथ सुन्यो र भन्यो, ‘राति गर्नुपर्ने अरु धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरू छन् ।’ फेरि उसका लागि रात र दिन सबै बराबर छ, किनकि ऊ कसैसँग डराउँदैन । डिनले उसलाई आफ्नो मित्रको गाडी चुनाव प्रचारका लागि उपलब्ध गराउने वचन दिए र केही धन दिएर बिदा गरे । यस प्रकार डिनले गुरुशिष्यका बीचमा सम्बन्ध बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान दिए !
डिनको घरबाट निस्किएर ऊ फेरि क्याम्पसतिर गयो । अगाडि केही सुकन्याहरू आइरहेका थिए । उसले तिनलाई देखेर हात जोडेर नमस्कार गर्यो र ‘बैनी’को सम्बोधन गर्दै तिनको स्वास्थ्य तथा मौसमलाई लिएर सस्तोखाले कविता सुनायो । बैनीको सम्बोधनका साथ ती सुकन्याहरूको अनुहारमा जसरी कान्ति क्षय भएको थियो, सस्तो कविता सुनेर त्यो क्षय तत्कालै हराएर गयो । सुकन्याहरू चिरबिरचिरबिर गर्दै अगाडि बढे ।
उसले चुनावलाई धिक्कार्यो, कारण यी सुकन्याहरूलाई कुनै अन्य मधुर सम्बोधनको ठाउँमा बैनीजस्तो शुष्क सम्बोधन गरिरहनु परेको थियो । चुनावपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने शैलीमा उसले आफ्नो टाउको हल्लायो । अनि फेरि एकपटक क्याम्पसको चक्कर लगाउन थाल्यो । धेरै बेरसम्म उसको जनसम्पर्क जारी रह्यो र थाकेपछि ऊ आफ्नो निवासस्थानतिर फर्कियो ।
घरमा दुःखी छात्रहरू उसको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । उसको सामुन्ने नानाभाँतीका समस्याहरू प्रस्तुत गरियो । विश्वविद्यालयमा भर्नादेखि लिएर कुनै युवतीलाई प्रेमपत्र दिनेसम्मका कतिपय कुराहरू उसले गम्भीरतापूर्वक सुन्यो । र, राष्ट्रिय नेताको अन्दाजमा बिस्तारै अनेक अर्थ लाग्ने वाक्यहरू बोल्दै गयो । धेरै मानिस सन्तुष्ट भएर फर्किए । मात्रै ती रहे जो उसँग एकदमै अन्तरङ्ग थिए ।
तिनीहरूसँग निक्कै बेरसम्म उसले कुरा गरिरह्यो, जसबाट तिनलाई विश्वास भएको थियो कि आज दिनभरि क्याम्पसमा उसको जुन रुप देखिएको थियो त्यो ‘सुनियोजित’ थियो । उसको सक्कली स्वरुप पनि त्यति नै त थियो जसलाई मानिसले वर्षौंदेखि चिन्दै आएका थिए । तिनीहरूसँग उसले चुनाव प्रचारको विषयमा कुरा गर्यो, पर्चा र पोस्टरका विषयमा कुरा गर्यो । साथै एउटा अर्को विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक चिन्तन ग¥यो, यदि विरोधी उम्मेदवारको एउटा खुट्टा भाँचिदिने हो भने त्यसको सौन्दर्यमा कस्तो असर पर्न सक्छ !
यसरी विभिन्न प्रकारका चिन्तनमा डुब्दै अनेक कार्य सम्पादन गरेर उसले आफ्नो दिन बितायो । रात पर्दा नपर्दै ऊ फेरि गल्लीको मोडमा रहेको चिया पसलमा क्रान्ति गर्न हिँड्यो । उसलाई थाहा थियो बिना क्रान्ति यो देशमा नेतागिरि पक्का हुनेवाला छैन । हाम्रा राष्ट्रिय नेता संसद् तथा कफी हाउसमा क्रान्तिको कुरा गरेर आफूलाई धन्य ठान्दछन् । उसको लागि संसद् या कफी हाउस उपलब्ध छैन । त्यसैले ऊ चियाको पसलमै क्रान्ति गर्छ । त्यहाँ उसले घण्टौं वर्तमान व्यवस्थाको खराबी अनि नयाँ व्यवस्थाबाट राष्ट्रलाई हुने लाभको बहुचर्चित विषयमा भाषण दियो । जुन चिया पसलमा काम गर्ने केटाहरू तथा विभिन्न अफिसका निम्नतहका कर्मचारीहरू उँघ्दै सुनिरहेका थिए ।
रात निक्कै छिप्पिएपछि ऊ त्यहाँबाट एउटा अर्को सार्थक दिन बिताएको सन्तोष मनमा बोकेर घर फर्कियो र चुपचाप सुत्यो ।
(सन १९५१ नोभेम्बरमा उत्तर प्रदेशको जौनपुरमा जन्मिएका साहित्यकार विभूतिनारायण रायले उपन्यास, निबन्ध र व्यङ्ग्यमा कलम चलाउँदै आएका छन् । उनको पाँच वटा उपन्यास प्रकाशित छ भने एउटा व्यङ्ग्यसङ्ग्रह र संस्मरण पनि प्रकाशित छ ।)